Hery lehibe ho an’i Barea ny fanohanan’ireo malagasy ny ekipa tany Egypte. Tamin-kafaliana tanteraka no niainan’ireo malagasy tany Egypte ny fandresena azon’i Barea nanoloana an’i Burundi omaly.
Afaka maneho ny maha izy azy i Madagasikara ary vonona ny handresy hoy ireo malagasy manohana ny barea any Egypte ary vonona ny hanohana hatrany ny ekipam-pirenena Malagasy izy ireo.
Tsy ny tany Égypte ihany fa ny teto an-toerana ihany koa dia naneho ny hafaliany taorian'iny lalao iny. Tao ireo nihorakoraka, nampaneno anjomara eraky ny arabe, nandihy sy nifaly tamin’ireo toerana maro teto andrenivohitra.
Fa isan'ny naneho ny heviny ihany koa taorian'iny lalao iny ireo mpifaninana eo amin’ny fitantnana ny federasiona Malagasin’ny baolina kitra. Tsara ny fivoaran'ny ekimpam-pirenena omaly raha oharina tamin’ny teo aloha hoy ity kandida iray ity. Miantso ny rehetra ihany koa izy amin’ny fanohizana ny firaisan-kina amin’ny fanohanana ny ekipa malagasy.
Voatanan’i Barea ny fampanantenana nataony fa ity lalao ity no fanomezana natolotr’izy ireo ho an’ny vahoaka Malagasy ato anatin’izao fankalazana ny fetin’ny fiverenan’ny fahaleovantena izao. Samy naneho ny fihetsempony ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay. Midika hoy izy ireo fa efa manomboka manana ny toerany i Madagasikara eto Afrika eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra.
Efa tsara toerana hiakatra any amin’ny dingana manaraka ny malagasy. amin’ny alahady izao kosa ny lalao fahatelo farany izay hamaritra ny tena lalany amin’ity fiadiana ny tompon –dakan’i Afrika ity.